CAALAMKA ONLINE - » Wasiirka arimaha dibada ee Maraykanka oo ku marmarsiinyooday in Inqilaabkii Masar kadhacay Sharci ahaa.
» Wasiirka arimaha dibada ee Maraykanka oo ku marmarsiinyooday in Inqilaabkii Masar kadhacay Sharci ahaa.
Friday, 02 August 2013 19:12
Wasiirka Arimaha Dibada ee Dalka Maraykanka John Kerry ayaa mar uu Telefishin Waraysi siiyey waxaa uu ku marmarsiinyooday in Inqilaabkii Madaxweynihii Masar lagu ridey uu Sharci ahaa kuna yimid rabitaanka Shacabka Masar.
John Kerry ayaa wuxuu noqonayaa Shaqsigii ugu horeeyey ee Wadamada Reer Galbeedka Xil intaa ´le'egna haya oo sitoos ah u Tageeray Inqilaabkii Masar ka dhacay. Walol dad badan ay aaminsanyihiin in Wadamada Reer Galbeedka oodhan taageersan yihiin Inqilaabka, haseyeeshee Siyaasiyiintooda ilaa hadda siyaalo dadban ayey arintaa uga hadleen oo maysan muujin inay Inqilaabka taageersan yihiin.
Waxaa uu yiri, Militariga Inqilaabka waxaa ay kusameeyeen codsiga Milyan iyo Malaayiin Shacab Reer Masar ah oo ka cabsiqaba in Dalkooda uu nidaamxumo iyo Dagaal ka dhaco, mana ay rabaan inay wax badan Awooda haystaan ee Nidaamkii Dimuqraadiyada ayey soo celinayeen.
Last modified on Friday, 25 March 2016 21:45
Published in: AMERIKA
Maraykanka oo sheegay Inay Safaradahooda iyo Qunsiliyadahooda dhawr Wadan oo Wadamada Islaamka kamida ay xiri doonaan Axada soosocota.